Runako uye utano Piggy bank of folk recipes
Vodka mumishonga yevanhu inotora nzvimbo inokosha. Doro chikamu chinonyanya kukosha mukugadzirwa kwemishonga yakawanda yemishonga yekushandisa mukati nekunze. Zvichida kusanganiswa kunonyanya kufanirwa mune mapeji anozivikanwa ndevodka nemunyu. Tinopa mikana yakawanda yekushandisa iyi kusanganiswa mukurapwa kweimwe zvirwere.
Vodka nemunyu wehara
Pamwe, hazvibviri kuwana munhu asingazivi kuti vodka nemunyu inobatsira kubvisa zvirwere . Asi haasi munhu wese anoziva nezvehuwandu hwezvakakwana zvezvikamu zviviri mugadzirisa. Kuti mugadziri wekuumbwa kwemuviri kuve kwakanyanya, 1/3 yepasipuni yemunyu inofanira kusanganiswa ne 80 g yevodka. Nenzira, mishonga iyi inoderedza marwadzo mumutsara wepamuviri.
Vodka nemunyu kune chepfu
Vodka nemunyu isiridzo yakanakisisa yekuporesa nekurutsira kwenguva refu, zvichibva pakusvibisa. Muna 50 - 60 gramu yevodka iwe unoda kudurura chetatu chepasipuni yemunyu, inomwisa uye inwa. Zvinotendwa kuti mhinduro yakanakisisa inogona kuwanikwa kana mushure maminitsi gumi nemashanu mushure mokutora vodka nemunyu, kunwa hafu yegirazi yemvura yakanatswa (kana kudya muchena).
Vodka nemunyu kubva kunotonhora
Nokuda kwehutonho, kusanganiswa kwevodka (100 g) uye munyu (1/3 ye teaspoonful) inoshandiswawo, asi nokuda kwehuipi huri nani hurikurudzirwa kuwedzera hafu-spoonful yepiresi yakasviba. Zvinonzwisisika mushure mokutora mishonga iyi kwemaminitsi maviri kuti musadya uye kunwa kuti mugone kuwana chikonzero chakanaka mukuporesa.
Compress - vodka nemunyu
Inobatsira kubvisa runyanga rweganda pazvitsitsinho zvevodka compress nomunyu. Kutanga kwemakumbo ibhati umo mupuni wepuni inoputika mu 1 litre yemvura inodziya. Pashure pemaminitsi 8 - 10, tsoka dzinopedzwa zvakanyatsonaka (asi dzisina kunatswa!) Uye dzakaputirwa nemucheka wakachena wekotoni, yakanyoroveswa nevodka. Pamusoro pemagumbo ose akaisa pahomwe yepurasitiki, uye--si yakasimba masokisi. Mvura yakadzi-munyu inosara usiku hwose.
Vodka nemunyu kubva pado rezino
Kuti ubvise mazino, iwe unogona kuedza kushandisa recipe yevanhu. Bhuti rinowira mazino rinochengetwa mumhinduro yemunyu muvodka kwemaminitsi mashanu. Zvadaro bvarura mazino ako uye gums nebrashi iyi. Nzira yacho inodzokororwa kazhinji pazuva kuti ibvise chirwere chinopisa.
Cherechedza chinyorwa! Hazvibvumirwi kubata munyu nevodka yevana nevechiri kuyaruka (kunze kwekushandisa kwekunze). Zviri nani kudzivisa kushandisa chirwere chevakadzi vane pamuviri nevarume vane zvirwere zvisingaperi zvepamu, chiropa neitsvo.
Primrose - inobatsira zvinhu uye zvinopesana
Fungus yetsoka - kurapwa nemishonga yevanhu
Kurapa kweprostate nemishonga yevanhu
Mafuta anokosha eGeranium
Uyu musikana anoramba achitsungirira
Mishonga ne birch sap
Cosmetic oils for face
Shark Fat ye Joints
Flaxseed mafuta mumakumbo
Kuchenesa chiropa ne oats
Iti miti yemafuta kubva kunotonhora
Eleuterococcus - Properties
Fashionable Hairstyles 2014
Sirilvings for nursery
Inguva ipi inopinda kuburikidza ne toxicosis?
Uyu munyori weRussia "akafuridzira" Internet nevana vake vevashandi vepafirimu!
Zvishongedze nemumwe sleeve
Ndeapi maruva anopa musikana?
Chirwere chepfungwa yepamusoro neyechirwere chechiropa
Chekuita chipfeko chemukadzi
Iwe une mwana anochera?
Ndezvipi zviri nani kuisa roses - mucheche kana mumatumbi?
Monastery yeSt. George Alamanu
Postoperative nguva mushure mokubviswa kwechibereko
Astigmatism - chirwere chei, uye nenzira dzipi inogona kurapwa?
Ive iberian icon ye Amai vaMwari - chii chavanonyengeterera?
Gymnastics Slavic charmers
Mifananidzo - mapfekero anowa 2012
Nguruve yakabikwa muzinga rinopisa
Nzira yekuchenesa sei gorofu gesi?